UWalsh uthatha i-helm e-IATA
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » UWalsh uthatha i-helm e-IATA
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
UWalsh waqinisekiswa njengoMlawuli Jikelele we-8 we-IATA yiNtlanganiso Jikelele ye-IATA yama-76 ngomhla wama-24 kuNovemba 2020
UWillie Walsh uthathe ngokusemthethweni indima yoMlawuli-Jikelele wombutho
UWalsh ujoyina i-IATA emva kweminyaka engama-40 kwikhondo lomoya
UWalsh uqhelene kakhulu ne-IATA, sele esebenze kwiBhodi ye-IATA yeeRhuluneli phantse iminyaka eli-13
Umbutho wezoThutho lomoya kuMazwe ngaMazwe (IATA) ubhengeze ukuba uWillie Walsh uthathe ngokusemthethweni indima yoMlawuli-Jikelele wombutho. Uphumelela eAlexandre de Juniac.
“Ndiyazithanda ngomzi mveliso wethu nangomsebenzi obaluleke kakhulu IATA Wenza egameni lamalungu ayo, hayi ngaphezulu kwexesha le-COVID-19. IATA ibiphambili kwimizamo yokuqalisa kwakhona unxibelelwano lwehlabathi, kubandakanya nokuphuhlisa i-IATA Travel Pass. Ngaphandle kokubonakala kodwa ngokubaluleka okulinganayo, iinqwelomoya ziyaqhubeka nokuxhomekeka kwiinkqubo zokuhlaliswa kwemali ze-IATA, Timatic kunye nezinye iinkonzo ezibalulekileyo ukuxhasa imisebenzi yabo yemihla ngemihla. Ndiyabulela kuAlexandre ngokushiya ngasemva umbutho owomeleleyo kunye neqela elikhuthazayo. Ngokudibeneyo, iqela le-IATA lijolise ngokupheleleyo ekubuyiseleni inkululeko yokuhamba enikezelwa ziindiza kwiibhiliyoni zabantu kwihlabathi liphela. Oko kuthetha inkululeko yakho yokundwendwela abahlobo kunye nosapho, ukudibana namaqabane oshishino abalulekileyo, ukukhusela nokugcina izivumelwano ezibalulekileyo, kunye nokuhlola iplanethi yethu emangalisayo, utshilo uWalsh.
“Ngamaxesha aqhelekileyo ngaphezulu kweebhiliyoni ezine zabahambi abahamba ngenqwelomoya ngonyaka kwaye ukuhanjiswa kwezitofu kubeke ixabiso lemithwalo yomoya esebenzayo. Iinqwelo-moya zizinikele ekunikezeleni ngeenkonzo ezikhuselekileyo, ezifanelekileyo nezizinzileyo. Injongo yam kukuqinisekisa ukuba i-IATA lilizwi elinamandla elixhasa impumelelo yezothutho lomoya lwehlabathi. Siza kusebenza kunye nabaxhasi kunye nabagxeki ngokufanayo ukwenza izibophelelo zethu kumzi-mveliso weenqwelo moya ozinzileyo. Kungumsebenzi wam ukuqinisekisa ukuba oorhulumente, abaxhomekeke kwizibonelelo zoqoqosho nezentlalo eziveliswa lishishini lethu, bayayiqonda nemigaqo-nkqubo esiyifunayo ukuzisa ezi zibonelelo, utshilo uWalsh.
UWalsh waqinisekiswa njengoMlawuli-Jikelele we-8 we-IATA ngeNtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka ye-IATA ngomhla wama-76 kuNovemba 24. Ujoyina i-IATA emva kweminyaka engama-2020 yokusebenza kwicandelo leenqwelo moya. UWalsh uthathe umhlala-phantsi kwi-International Airlines Group (IAG) ngeyoMsintsi 40 emva kokusebenza njenge-CEO ukusukela oko yaqalwa ngo-2020. Waqala umsebenzi wakhe wokuhamba ngenqwelomoya eAer Lingus ngo-2011 njengomqhubi wenqwelomoya.
UWalsh uqhelene kakhulu ne-IATA, esebenze kwiBhodi ye-IATA yeeRhuluneli phantse iminyaka eli-13 phakathi kuka-2005 ukuya ku-2018, kubandakanya nokusebenza njengoSihlalo (2016-2017). Uza kusebenza kwiOfisi yoLawulo yoMbutho eGeneva, eSwitzerland.